Ismiidaamin ka dhacdey Afgooye
16 Jun 16, 2012 - 9:12:17 AM
Qarax Ismiidaami ah oo aan la ogeyn khasaaraha ka dhashay ayaa maanta 16 June ,2012 ka dhacay Degmada Afgooye ee Gobolka Shabeelada Hoose oo ay DF iyo AMISOM gacanta ku hayaan.
Weerarkan oo loo adeegsaday Gaari laga soo buuxiyay Walxaha Qarxa ayaa wuxuu ku qarxay saldhig ay DF ku leedahay Degmada Afgooye, iyadoo Saraakiil u hadlay Dowlada ay sheegeen in qaraxu uu khasaare geystay balse aan la sheegin karin cadadka.
Ciidamada DF iyo kuwa AMISOM ayaa isku gadaamay goobtii uu qaraxu ka dhacay oo ahayd Dugsiga Sare ee Afgooye oo ay dhawaan ay ciidamadu saldhig ka dhigteen.
Dad Goobjoogayaal ah ayaa sheegay inay Qaraxu uu ahaa mid xoogan ayna arkeen Qiiq iyo Uur cirka isku shareertay markii uu Qaraxu dhacay. waxayna dadku intaas ku dareen in dhaqdhaqaaqa degmada oo dhan la hakiyay.
Xubno Al-shababa u hadlay ayaa sheegay inay iyagu iyagu ka dambeeyeen weerarka ayna u adeegsadeen gaari walxo qarxa laga buuxiyay, iyagoo sheegay in goobta ay ku sugnaayeen ciidamo fara badan oo ay ku jiraan kuwa Nabadsugida.
Illaa hadda lama oga khasaaraha ka dhashay weerarkan Ismiidaaminta ah oo ka dhacay degmada Afgooye, waxaana weerarkan uu noqonayaa kii ugu horeeyay oo ka dhaca degmadaas tan iyo markii ay ciidamada DF iyo AMISOM la wareegeen.
Degmada Afgooye ayaa waxaa dhawaanahan booqanayay Madaxweynaha Somalia balse maanta kuma sugnayn, waxaana tani ay cadeyn u tahay in Al-shabaab ay weli khatar muuqata ku tahay Dowlada Somalia.